........HIGH WAY UP !: အသွင်သစ်နဲ့ ထိုးဖောက်လာတဲ့ Cebu Pacific လေကြောင်းလိုင်း
အသွင်သစ်နဲ့ ထိုးဖောက်လာတဲ့ Cebu Pacific လေကြောင်းလိုင်း
ဖိလစ်ပိုင်က Cebu Pacific လေကြောင်းလိုင်းကတော့ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။ သူ့ထက်အင်အားအလွန်ကြီးမားတဲ့ လေကြောင်းပြိုင်ဘက်တွေနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ နည်းမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားနေပုံပါပဲ။ လေယဉ်မယ်လေးတွေကို Safety Regulation ရှင်းပြတာကို ရိုးရိုးမဟုတ်ဘဲ Customer တွေအပေါ် ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင် Lady Gaga ရဲ့ Bad romance သီချင်းနဲ့ ကရင်းရှင်းခိုင်းတာဟာ တော်တော်သဘောကျစရာကောင်းပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် Customer တွေအတွက်တော့ အမှတ်ရစရာအဖြစ်ကျန်ခဲ့စေမှာ အမှန်ပါပဲ။ ကိုယ့်နိုင်ငံက လေကြောင်းလိုင်းတွေတော့ ဘယ်လိုလူကဦးဆောင်ပြီး ဘာတွေဘယ်လိုဖြစ်နေလဲမသိ။ ကိုယ်လည်းတစ်ခါမှ မစီးဖူးသေး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်နိုင်ငံကို သူများထက်သာစေချင်ပါတယ်။
Cebu Pacific isalow cost carrier operating domestic and international services from its Manila base and three hubs. Regional destinations are served in Brunei, China, Indonesia, Japan, Malaysia, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand and Vietnam.
Operating revenue (million) 646 USD (2010)
Passengers (million) 10.5 (2010)
Fleet 37 aircraft in service
AB 2010 financial ranking 119
AB 2010 traffic ranking 109